पराजय पश्चात डा.शेखरले भने, ‘जिबनभर लोकतन्त्रका लागी लागिरहनेछु’ | suryakhabar.com
Home पु.समाचार पराजय पश्चात डा.शेखरले भने, ‘जिबनभर लोकतन्त्रका लागी लागिरहनेछु’
on: २३ मंसिर २०७४, शनिबार १०:३५ In: पु.समाचारTags: No Comments
काठमाण्डौ । मोरङको क्षत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भएक नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोईरालाले निर्बाचन हारेकोमा विजय हाँसिल गर्नेलाई बधाई दिर्दै आफू मूलूक र लोकतन्त्रका लागी खटिरहने बताएका छन् ।
एक विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. कोईरालाले “मुलुकको समृद्धि र लोकतन्त्र संस्थागतका लागि अविचलित रुपमा यहाँहरुसँगै रहनेछु।
समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानको रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागि हुनुहुने र सदभाव ब्यक्त गर्नुहुँने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । लामो राजनीतिक संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्दै शान्तिप्रक्रिया सार्थक निश्कर्षमा पुर्याउने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने क्रममा हामी छौं । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । निर्वाचनको परिणामलाई सहजरुपमा लिनुपर्छ । भनेका छन् ।
मुलुकका दुरदराज लगायत मोरंगबासीको शिर कुनैपनि अवस्थामा झुक्न दिने छैन । मोरंगको बिकास र उन्नतीमा बिगतमा जस्तै क्रियाशिल रहँदै यहाँहरु सँगै हातेमालो गरेर हिड्नेछु । र, नेपाली काँग्रेसका निम्ति तपाँईहरूले दिनुभएको प्रत्येक मतको उच्च मूल्यांकन गर्दै अगाडि बढ्नेछु । मुलुकभरका आम कार्यकर्ताको सुख दुखमासँगै रहने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गर्दछु । निर्वाचनको परिणामबाट कत्तिपनि बिचलित नहून देशभरका लोकतान्त्रिक पक्षधरहरु र शुभचिन्तकलाई आग्रह गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोग गर्नुहुने सूरक्षा निकाय,कर्मचारी, संचारकर्मी, उध्योग/ब्यवसायी लगायतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरो क्षेत्र लगायत समग्र स्थानमा निर्वाचित सांसदहरुमा पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। जय नेपाल।”
डा. कोईरालालाई एमालेका लालबाबु पण्डितले हराएका हुन् ।
काँग्रेस माहामन्त्री डा. कोईरालाले भारी मतले जित्ने !
२३ मंसिर २०७४, शनिबार १०:३५